Ajaanibta si buuxda loo tallaalay waxay geli karaan Mareykanka laga bilaabo Nofeembar 8
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Ajaanibta si buuxda loo tallaalay waxay geli karaan Mareykanka laga bilaabo Nofeembar 8
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Booqdayaasha si buuxda loo tallaalay waxay geli karaan Mareykanka laga bilaabo Nofeembar 8.
Tallaallada COVID-19 oo ay oggolaatay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) oo aan laga isticmaalin ama aan lagu oggolaan Maraykanka ayaa loo aqoonsan doonaa inay yihiin nooc tallaal oo sax ah, taasoo siinaysa iftiinka cagaaran ee AstraZeneca oo UK soo saartay, iyo sidoo kale Sinopharm iyo Sinovac ee Shiinaha.
Mareykanka wuxuu kor u qaadayaa xayiraadaha safarka ee booqdayaasha caalamiga ah ee si buuxda looga tallaalay COVID-19.
Socotada shisheeye oo si buuxda looga tallaalay COVID-19 ayaa loo oggolaan doonaa inay soo galaan Mareykanka laga bilaabo 8-da Noofembar
Siyaasadda cusub ee Mareykanka waxaa haga caafimaadka dadweynaha, ad adag, oo joogto ah, ayuu yiri Aqalka Cad.
Aqalka Cad ayaa maanta ku dhawaaqay qaadista xayiraadaha safarka ee COVID-19, wuxuuna sheegay in dhammaan safrayaasha ajnabiga ah ee si buuxda looga tallaalay coronavirus loo oggolaan doono inay soo galaan Mareykanka laga bilaabo 8-da Noofembar.
Kaaliyaha xog -hayaha saxaafadda Aqalka Cad Kevin Munoz ayaa xaqiijiyay maanta in “siyaasadda socdaalka cusub ee Mareykanka ee u baahan in la tallaalo dadka ajnabiga ah ee u socdaalaya Mareykanka waxay bilaaban doontaa 8 -da November.”
Mr. Munoz ayaa sidoo kale bartiisa Twitter -ka ku soo qoray in siyaasadda “ay hagayso caafimaadka dadweynaha, mid adag, oo joogto ah.”
Xoogso Xayiraadda safarka Mareykankas malaayiin qof oo soo booqday oo ka yimid Shiinaha, Canada, Mexico, India, Brazil, in badan oo Yurub ah ayaa ka maqnaa Mareykanka, waxay curyaamiyeen dalxiiskii Mareykanka, waxayna dhaawaceen dhaqaalihii bulshada xadka.
Bishii la soo dhaafay, Aqalka Cad ayaa sheegay in uu xayiraadaha ka qaadi doono dadka safarka ah ee ka kala yimid in ka badan 30 dal, oo ay ku jiraan Shiinaha, Hindiya, Iran, iyo inta badan Yurub laga bilaabo horraantii Nofembar, laakiin waxay joojisay inay bixiso taariikh sax ah.
Talaadada, US mas'uuliyiintu waxay sheegeen in waddanku kor u qaadi doono xayiraadaha dhaqdhaqaaqa xuduudaha dhulka iyo marinnada doonyaha ee Kanada iyo Mexico kuwa si buuxda loo tallaalay.
Tallaallada COVID-19 oo ay oggolaadeen Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) kuwaas oo aan laga isticmaalin ama aan la oggolaan Maraykanka ayaa loo aqoonsan doonaa inay yihiin nooc ka mid ah tallaalka tallaalka, taasoo siinaysa iftiinka cagaaran AstraZeneca oo UK soo saartay, iyo sidoo kale Sinopharm iyo Sinovac ee Shiinaha.
Kanada waxay dib u furtay soohdinta dhulka ee ay la leedahay Mareykanka horraantii Agoosto si ay si buuxda ugu tallaasho Ameerika tijaabo xun oo COVID-19 ah oo loogu talagalay safarka aan muhiimka ahayn. Is -weydaarsi la'aanta deriskeeda, si kastaba ha ahaatee, waxay cabasho ka keentay mas'uuliyiinta Kanada.
Mamnuucidda tiro badan oo ah muwaadiniin aan Mareykan ahayn oo soo gala Ameerika ayaa la dhaqan geliyay in ka badan 18 bilood cudurka faafa ee coronavirus. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa markii ugu horreysay xayiraad saaray dadka safarka ah ee ka imanaya Shiinaha horraantii 2020, ka dibna wuxuu xaddiddan gaarsiiyay inta badan Yurub.
Ururka Socdaalka Mareykanka ayaa soo saaray bayaankan soo socda ee ku dhawaaqista in Mareykanku uu si rasmi ah u furi doono xuduudaheeda si loo talaalayo socdaalayaasha caalamiga ah 8 -da November:
“Safarka Mareykanka wuxuu muddo dheer ku baaqayay in si nabad ah dib loogu furo xuduudahayaga, waxaanan soo dhaweynaynaa maamulka Biden ee ku dhawaaqay taariikh cayiman oo dib loogu soo dhoweynayo socdaalayaasha caalamiga ah ee la tallaalay.
“Taariikhdu aad bay muhiim ugu tahay qorshaynta-shirkadaha diyaaradaha, meheradaha ay safarka taageerto, iyo malaayiin safar oo adduunka oo dhan ah oo hadda sii hormarin doona qorshayaasha ah inay mar kale booqdaan Maraykanka. Dib-u-furidda booqdayaasha caalamiga ah waxay siin doontaa jaah-wareer xagga dhaqaalaha ah waxayna dardar-gelin doontaa soo noqoshada shaqooyinka la xiriira socdaalka ee ku lumay xannibaadaha safarka.
"Waxaan ku bogaadinaynaa maamulka aqoonsiga qiimaha socdaalka caalamiga ah ee dhaqaalaheena iyo dalkeenna, iyo ka shaqeynta sidii si nabadgelyo ah dib loogu furi lahaa xuduudaheena oo Mareykanka dib loogu xiri lahaa adduunka."